Ohatrinona ny iPad 3 eo ambanin'ny Apple Recycling Program? | Vaovao IPhone
Ny fampidirana iPad iPad an'ny taranaka fahefatra tamin'ny herinandro lasa teo dia nampiakatra ny fahatezeran'ny mpampiasa. Herintaona mahery kely lasa izay dia nisy maro izay vita tamin'ny 'ny iPad vaovao' izay hijanona tsy ho vaovao Volana vitsivitsy taty aoriana. Hetsika iray tsy nampoizina ary mihevitra bebe kokoa fa ny orinasa dia mamafa ny radika rehetra amin'ny iPad an'ny taranaka fahatelo amin'ny sarintany.
Ny iPad 2 dia mbola amidy ary avy eo isika dia mankany amin'ny iPad vaovao antsoina hoe 'iPad misy fampisehoana retina'. Te-hanala ny iPad taranaka fahatelo anao ve ianao? Eny, tsy mora ho anao koa ny Apple, satria araka ny Fandaharana Recycling, iPad fotsy fotsy 16 GB, fifandraisana Wi-Fi ary amin'ny toe-javatra tonga lafatra ka 250 euro fotsiny no vidiny. Fandaniam-bola tanteraka.
Noho izany, ny safidy tsara indrindra dia ny mankany eBay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Ohatrinona ny iPad 3 eo ambanin'ny Apple Recycling Program?
lologan dia hoy izy:
Fanesoana tanteraka ho an'ny iPad 3 64GB (Wi-Fi + 4G) (Mainty) fa ity tonga lafatra tsy misy fahasimbana ity dia manome € 345,00 fotsiny, tsy mikasa ny hivarotra azy aho fa mazava ho azy fa mahantra ny safidy fanodinana Apple.
Mamaly an'i lologan
Paspas Areavag dia hoy izy:
Tsy mahantra izy io. "Mahay." Fa maninona? Eny, satria avy eo dia avoak'izy ireo amin'ny tranokalan'izy ireo ho iPad "voaverina" amin'ny vidiny mahagaga, ary mahazo tombony be indray.
Ary raha tsy izany, bokotra santionany: iPad 3 Generation 32Gb Wifi amin'ny € 469 http://store.apple.com/es/product/FD329TY/A/ipad-con-wi-fi-restaurado-con-32-gb-en-blanco-%283.%C2%AA-generaci%C3%B3n%29
Valiny tamin'i Paspas Areavag
kuitina dia hoy izy:
Mazava ho azy fa tsy matoky ny paoma intsony aho, tsy hanova ny ipad3 na vaovao intsony aho na izay tianao hiantsoana azy ho an'ny ipad4, eto no nahatongavanay paoma ...
farafaharatsiny farafaharatsiny momba ny ipad tsy iray hafa….
Mamaly an'i kuitina
Nietzsche44 dia hoy izy:
Fantatrao ve ny fomba andefasanao fitarainana ara-dalàna? Fantatro fa tsy ho lasa lavitra izany, fa ... Manan-jo hamoaka vokatra ianao isaky ny tianao izany, saingy tiako ny hampazava tsara fa amin'ny fanaovan-javatra amin'izany fomba izany, farafaharatsiny iray amin'ireo mpanjifanao (misy Apple fitaovana maro Manana aho) be.
Valiny tamin'i Nietzsche44
txavalote dia hoy izy:
Manaiky tanteraka. Aiza no ahafahanao mandefa fitarainana amin'i Apple? Mahamenatra izany
Mamaly an'i txavalote
Hanombohana fitarainana sy fitenenana ratsy, izay manimba be dia be, fa tsy faly amin'ny paikadiny ny tsirairay, tsy eo intsony ilay orinasa. Ao anatin'ny ratsy no misy ny lafy tsara, afaka 50 taona dia ipad3 ho relicikan'ny mpanangona. hahahaha kinova voafetra, naharitra 7 volana ary nanjavona, vaovao ao amin'ny Apple izy io, tamin'ny fotoana nisy zavatra toa an'io nitranga talohan'ny bankirompitra. (Ny tadidiko)
Manantena aho fa hitranga amin'ny Apple ity volavolan-dalàna ity amin'ny Krismasy. Na Android aza tsy sahy nanao be loatra **. Fantatry ny mpampiasa Android rehetra fa + - enim-bolana aorian'ny nahazoany ny sainan'ilay marika, dia mamoaka kinova vitaminaina izy io. Fa io dia ampahany amin'ny fantatr'izy ireo, ny haino aman-jery manampahaizana manokana dia efa nilaza azy mialoha raha te hiandry ianao, eny fa na dia miaraka amin'ireo fiasa vaovao aza, mba tsy hahatonga ny nenina taty aoriana.
Hatramin'izao dia nesorin'ny mpanjifa Apple izany satria fantatr'izy ireo fa amin'ny + - herintaona dia hanana ny maodely ambony izy ireo. Izao dia niova hatramin'ny tsy nampitandremana na inona na inona, tsy misy ahiahy na inona na inona, lany andro ny fitaovanao, na dia amin'ity tranga ity aza dia manjavona tsy ho sarintany mihitsy aza.
Araka ny nahafantarako azy dia hanova ny iPad 3 novidiana i Apple (maso! Ao amin'ny Apple Store ofisialy ihany, izany hoe, tsy mendrika na ECI, na Mediamarkt, na fivarotana hafa), iray volana alohan'ny fanombohan'ny ny iPad 4. Ary ireo izay novidiko iray volana sy iray andro talohan'izay? Ary ilay nividy sy nampihetsika ny marainan'ny keynote tao amin'ny ECI na Mediamarkt satria tsy nisy nahatonga anao hiahiahy iPad vaovao ary tsy nahaliana anao ny haben'ny Mini?
Araka ny nolazaiko fa mahamenatra ity ary manantena aho ary maniry (na dia mpampiasa Apple tena faly amin'ny iPhone 4 sy iPad 3 aza), dia nahazo azy io ny faktiora tsara amin'ny Krismasy ary tsy vidian'ny olona fotsiny izany satria manao izany izy ireo tsy matoky azy Manzana. Izy ireo ihany no tokony nitady an'io tamin'io fotokevitra marina io, satria manomboka izao iza no mahalala raha mbola hanao izany indray izy ireo?
Mitaraina ry namana, tsy nanao an'izany mihitsy ianao mandra-paharatranao, mila mitaraina bebe kokoa ianao ary tsy mandefa iray amin'izy ireo, ny marketing izay ampiasain'i Apple dia tsotra, hitanao hatrany amin'ny tontolon'ny fiara izany, lava be ny manazava fa mila ny isany, Satria ireo orinasa manana taona maro misy ary ny fahombiazany ary ny tsy fahombiazany dia mandalo zavatra iray ihany, miaraka amin'ny anarana hafa sy ny paikadim-barotra, azo jerena mialoha izay mety hitranga amin'ny fihetsik'izy ireo amin'ireo orinasa hafa nanao zavatra mitovy amin'izany.
Mividy fiara ianao izao amin'ny vidiny 30 Euros, hataterinao rahampitso ary homena anao 6 Euros latsaky ny vidiny ianao, ary hamidiny 2 euro latsaka satria efa voasoratra ara-dalàna. Etsy ankilany, maro aminareo no tsy hahazo ny fampisehoana omen'ny ipad4 satria misy olona tsy mampiasa lalao matanjaka na mitaky zavatra, tsy mila miditra amin'ny korontana izy ireo.
Inona no tsy mampino ahy fa tsy misy orinasa mpifaninana mahalala ny fomba handresena an'i Apple amin'ny alàlan'ny lalao mitovy, satria BMW sy Audi dia mitovy amin'ny Mercedes? fanaovana maodely izay nitazona 3 ka hatramin'ny 4 taona tsy nanova ny kinova, hisorohana ny fihenan-danja amin'ny fampiasam-bola, avy eo toy ny tsy nisy na iza na iza fa i Asus dia nanangana zavatra nitovizany, (mpanova) izay nahira-tsaina tokoa saingy tsy nahomby ny marketing sy ny heriny ambany. Apple dia nipoitra tampoka, ity fanavaozana adala ity ary ny fanafoanana ny vokatra dia manala baraka loatra, mety misy antony maro, fa tsy hisy na iza na iza lazain'ny orinasa.
Joseroquero dia hoy izy:
Mahamenatra izany ary tsy hividy vokatra Apple hafa aho !!! Azoko tsara izany
Valiny tamin'i Joseroquero
Jamiro100 dia hoy izy:
Tokony ho nanamora kokoa an'ireo nividy ity ipad ity izy ireo tamin'ity fomba ity, toa izany fa toa marika mazava fanamavoana ny mpampiasa izy ireo.
Valiny amin'i Jamiro100
Emiliobenitez dia hoy izy:
Tena hosoka. Manana imac 27 ″ aho, iphone 4s ary 10 andro lasa izay nividianako ny ipad 3, tao amin'ny ECI daholo izany. Nandeha nitaraina momba ny fandidiana natao sy ny farany nataon'ny Apple Company aho, ary ny fandefasana miafina ny Ipad 4 ary nilaza tamiko izy ireo fa ho an'ny fanovana, tsy misy. Tsy hividy vokatra Apple intsony aho. Mahatsiaro tena voafitaka aho !!!
Valiny tamin'i Emiliobenitez
Solonely61 dia hoy izy:
Mampalahelo fa izany no tsapantsika rehetra mividy azy (na saika ny rehetra)
Mbola manitikitika ny saina fa mandraka ankehitriny dia nantsoina hoe "Vaovao" Ipad izy, ary raha vao niditra ny sehatra Ipad 4 dia nantsoina hoe ipad 3.
Mba hividianana vy kely amin'io raharaha io dia holazaiko fa ny Apple sy ny "Vaovao" Ipad dia dokambarotra ho an'ny famafana lamba fidiovana:
na tsy manakilasy azy, na manafina azy…. Fafao io !!!
Bye Bye «Vaovao» Ipad 😉
Mihomehy aho fa tsy mitomany
Valiny amin'i Solonely61
Christian lopez rubio dia hoy izy:
Tiako ihany koa ny hametraka fitoriana amin'ny kilasy, tsy izany
ara-dalàna, halatra mitam-piadiana ity, fantatsika rehetra izany
Ny fihetsika amin'ny ampahany amin'ny paoma dia takolaka iray ary tsy mandeha amin'ny lalana mihintsy koa izy io
mahazatra, fantatsika rehetra fa ny fivoaran'ny tontolon'ny teknolojia dia
ara-dalàna ary raisintsika izany, amin'ny lozika na satria efa nahazatra antsika izany.
Manana iPad 3 hatramin'ny andro fandefasana aho, ary izaho dia
Tezitra aho ary mieritreritra aho fa tsy hanao na inona na inona mihitsy i Apple
Mikasika ny nanaovan'izy ireo izany satria nila izy ireo ary ho zavatra iray izany. Fa ahoana
Raha hanompo ahy izy, ary isika rehetra dia afaka mahita ny tena tarehy
amin'ity orinasa ity ary mieritrereta tsara momba izay sy aiza no handaniantsika ny tahirinay.
Io no ipad ahy voalohany sy farany …….
Valiny tamin'i Christian Lopez Rubio
Eny, ny ahy manana 2 volana 64gb sy 3g raha omena ahy 600 tanana hafa aho dia sambatra aho, fihenam-bidy izaitsizy, amin'izao fotoana izao tsy misy zavatra hafa manintona ahy avy any Apple, tsy tiako ilay mac vaovao koa, ny politikany kendrena manery antsika ireo izay maniry, ho ahy dia nanavao bebe kokoa an'ity sekta ity mandra-piovako, farafaharatsiny hitako efa ela io ary hitahiry koba tsara vintana aho.
Eny, naneso anay i Apple. Namidiko tsara ny ipad 2, saingy ity iray izay voafafa tamin'ny sari-tany ary nosoloina maodely ambony amin'ny vidiny mitovy…. Iza no itadiavanao azy? (Na dia tsy mikasa ny hijery maso indray aza aho).
Manana ny hevitro aho fa naka iPad efa tapitra izy ireo mba hitahiry ireo kaonty ary izany no antony tsy nanaovan'izy ireo batemy azy ho ipad 3, ny ipad «vaovao» ihany (efa ipad «taloha»… sa tsara «very»?) Ary ankehitriny dia mamoaka ny tokony ho izy izy ireo fa tsy ... Na izany na tsy izany, inona no nolazaina fa naka ny toupee izahay.
Raha ny fanazavana, tamin'ity Krismasy ity dia saika hahazo kapsily ora 2tb aho…. Fa izao no ataoko, satria amin'ny Janoary dia mamoaka 4tb amin'ny vidiny mitovy izy ireo…. Na izany na tsy izany dia aleoko mieritreritra an'io 😉
Andraso, taranaka vaovao iPad 4, izay fanandramana iray hafa, tandremo fa ho antitra indray ity vaovao ity tsy ho ela, ireo Apple ireo dia hahazo LSD, ary afaka manantena zavatra avy amin'izy ireo ianao, efa nanamboatra ny iphone5 izy ireo, izy ireo ihany no nilaza ny varotra, fotoana rehefa midina ambany amin'ny taona ho avy izy ireo ary tsy maintsy hamoaka vokatra nohavaozina indray hahazoana fitokisana, koa mitandrema, fotoana mampidi-doza hividianana ny vokatrao.
Ny zavatra tsy mampino dia ny an'ny ipad 3 amin'ny 16 GB dia mandoa 250 izy ireo fa amin'ny iray amin'ny 32 GB dia manome 268. 18 euro bebe kokoa izy ireo !!! Varotra izaitsizy tokoa, fa ho an'i Apple izay mivarotra azy aminao amin'ny vidiny 469 Euracos!
Ary nohavaozina avy amin'ny inona? Mividy ipad izy ireo fa ao anatin'ny 7 volana dia tokony ho madio (farafaharatsiny mba ho ahy) ary tsy mandena ny rantsan-tànany dia amidy indroa heny noho izany izy ireo. Mazava ho azy fa raha misy mivarotra ny ipad amin'i Apple fa tsy manao azy faharoa, dia miala ilay clamp.
Tandremo anefa! Inona no mahasosotra ny zavatra nataon'izy ireo, saingy mazava ho azy raha ny amiko dia toa manana iPad 3 aho (na izay iantsoana ilay zazalahy) mandra-pahatongan'ny tranom-bakoka, satria ny tsy hataoko dia milalao miaraka amin'ireo tompokolahy ireo.
Steve wozniak ihany no mahay mividy modely ipad rehetra mivoaka !! 😉
Perly dia hoy izy:
Tsy ara-dalàna izy ireo, nividy ny ipat 3 aho tamin'ny volana martsa ary rehefa afaka 7 volana dia namoaka iPat malaza niaraka tamin'ny retina mampihomehy izy ireo satria nandoa 700 euro aho ho an'ny modely vaovao ary hita fa 7 volana taty aoriana dia lasa tsara kokoa amin'ny vidiny mitovy. Ary eo amboniny dia midina. Ilay iray ividianako 100 euro latsaka ary hampiato azy eo amin'ilay fitaovana dia tsy mandeha tsara ary tsy te handray andraikitra amin'ny hadalana toy izany i aplee
Mamaly an'i Perly
Ankehitriny, manome hevitra aho hiantsoana anao, miala amin'ny fiantsoana anao tsy misy. Misy aminareo ve manararaotra ny iPad vaovao? fa raha manana iPad sy iPhone fotsiny ny ankabeazanareo dia mitaraina momba ny hadalana ianao, manana iPad 2 aho ary mbola mandeha tsara, mila hery bebe kokoa ve ianao? Tena mila mandeha mijery dokotera ianao satria tsy mahazatra izany. Mazava fa matetika i Apple dia mitondra fanavaozana ao anatin'ny paosin'ny vitsy, saingy raha tsy amin'ny tranga tsy fahita dia tsy ilaina ny manavao. Manana 2 iMac sy Macbook aho ary ny zavatra vaovao indrindra dia ny taona 2007 ary mitohy miasa toy ny manintona izy io, tsy manana ny sasany amin'ireo fiasa farany farany aho, inona no azoko atao? Isaky ny maniry ny Apple.
Heveriko fa miaina ao anatin'ny fanjakana mitohy ny olona manana ny farany, fa inona kosa? Hitanao ny olona mitady vola ambanin'ny vato hividianana iPhone 5 ary avy eo apetrany ao an-dohany ny tanany satria tsy afaka mitroka izany izy ireo ary manana izany amin'ny fampiharana maimaim-poana fotsiny izay tsy dia mandeha loatra.
Ry tompokolahy, andao isika hanjary ho pragmatika kely kokoa, ny iPad 3 (tsy tokony ho diso) dia manohy manome lasopy miaraka amin'ny onja 90% amin'ireo takelaka eo amin'ny tsena ankehitriny. Tena ilaina ve ny fananana ilay vaovao? Ny antony tokana hitako dia raha nividy iPhone 5 ianao hialana amin'ny fahasamihafan'ny mpampifandray ary hijanona amin'ny Lightining ihany, fa ny zavatra hafa kely.
Raha fintinina, manelingelina antsika ny rehetra rehefa tsy ny maodely farany indrindra intsony ny fividianana farany anay, fa manomboka amin'izany ka hatrany amin'ny fitarainana toy ny ankizy ao an-tokotanim-pianarana rehefa manao toy ny vaovao ny iPad-nao dia toa tsy mitombina amiko izany.
Mamaly an'i abrahan
Toa tsy mahadiso hevitra ahy izany. Manana ny ipad "vaovao" na 3 na izay iantsoana azy aho satria raha ny filazan'ny Apple dia nitsahatra tsy nisy izy ary faly amin'izany aho ary tsy hanova azy. Ny fanontaniana dia:
Raha mankany amin'ny pejy Apple ianao dia tsy afaka mampitaha ny ipad vaovao amin'ny hafa, ipad 1, 2 ary retina ihany (miaraka amin'ny micro a6x).
Nanana iPad 2 aho ary nivarotra azy hividy ilay vaovao ary nahazo vidiny lafo. Na izany aza, izao raha te-hivarotra ny ahy aho, ohatrinona no hangataka izany? Raha ny vaovao sy ny 4 manana ny vidiny mitovy ary mazava ho azy fa raha tsy manana iPad aho izao ary te-hividy iray, dia tsy handoa ny an'ny vaovao aho na ho an'ny hafa miaraka amin'ny mikrophone heverina ho matanjaka kokoa.
Azonao ve izao? Tsy ny fananana ny farany, raha tsy ny fahazoana anao tsy hahavery ny sandany (farafaharatsiny mba ho ahy)
Raha mividy zavatra ianao, ankoatry ny fankafizanao azy dia manantena ianao fa raha mivarotra izany dia mahazo faran'izay betsaka araka izay tratra. Mazava ho azy fa misy olona manam-bola be dia be afaka manome izany ary mividy iray hafa. 😉
iBooks dia havaozina mba hamahana ny olanao